ब्लड क्यान्सर सानो बाबुलाई आर्थिक सहयोग गरौं
जे सोचेको हुन्छौ त्यो हुदैन, जे सोच्दैनौ त्यो हुन्छ । कदम कदाचित हामीलाई केही भयो भने दु:खी हुन्छौ र मुटु अनि दिमागमा त्यसको असर सिधा पर्छ र सहन गार्हो हुन्छ । परीवारमा कोहि बिरामी भयो भने कतिको पीडा हुन्छौ हामी एक पटक सोचौ त मानबतालाई हृदयमा राखेर हाम्रो नानिहरु सामान्य बिरामी हुदा हामी कतिको छटपटिन्छौ ।
एक महिला आफ्नो छोरालाई ब्लड क्यान्सर लाग्दा अनि आर्थिक अभावले छटपटी रहदा अवस्था के हुदो हो ? त्यो अवस्थामा जिन्दगी भर साथ दिन्छु भन्ने जीवन साथिले साथ छोडी दिदा कुन अवस्थामा जीवन गुजारी रहेको होला हामिले एक छिन कल्पना गरौ ।
मकवानपुर गढी गाउपालिका वार्ड नं -६ सोलिथुम निवासी शान्ती पाख्रीनको छोरालाई ब्लड क्यान्सर रोग लागेर उपचारार्थ चितवन क्यान्सर हस्पिटलमा दौडीरहेका छन । आफ्नो प्यारो छोरालाई बचाउन ओठ, मुख र आत सुक्दा आँसु र पसिनाले भिजाउदै ,आफ्नो कोख बाट जन्मेको सन्तान एक्लो छोरा बचाउन दिन रात नभनी छटपटिदै भतभती पोलेको मन एकोहोरीदै दौडीरहेको छ। भनेको समयमा हस्पिटल लैजान नसक्दा दिन प्रतिदिन औषधि उपचारार्थ निकै कठिन संघर्षमा बाचिएको आमा अनि अस्वस्थ छोरा पनि गल्दै गै रहेको शान्ती पाख्रीन पीडा सुनाउछिन ।
अबको उपचार गर्न आर्थिक अवस्था निकै कठिन भएको भरतपुर छोरा लैजान पनि खर्चको जोहो नभएको शान्ती पाख्रीन गुनासो पोख्छिन र उनी भन्छिन, सहयोगी हातहरु र दानी मनकारी हातहरुले आर्थिक सहयोग लम्काए छोराको उपचार सफल हुन्थ्यो भन्ने आशा अझै कायम रहेको बताउदै आफुलाइ समयले भाग्यले निर्मम यातना दिए पनि चुनौती संग समस्या संग लड्न सकिन्छ भन्दै सुकेको ओठ मुख आशुले भिजाउदै लामो सासले सुस्केरा तान्छिन ।
कांग्रेस नेता कुर्मीले गरे गौघाटमा सहयोग
भारतबाट आउने बढेमा तनहुँमा के छ तयारी ?
लकडाउनमा स्थानियले गरे सार्वजनिक शौचालय निर्माण (तस्वीर सहित)